Home » Politics, Issues » ပြီးတာပဲ….
ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ NLD ကတင်​တဲ့ သမ္မတ ဟာ ပြည်​သူ့ သမ္မတ ပါပဲ ။
NLD ဆိုတာက ကျုပ်တို့ကိုယ်စားစီမံပေးဖို့ ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါလက်ပါ ရွေးထားတာလေ..နော..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကြိုးဆွဲရာကမယ့်သူဆိုတာ ပေါ်လွင်စေလိုရင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်..။
ကျုပ်တော့ ဒီတသက် ဘယ်တော့မှ သမ္မတအရွေးမခံတော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ..
“ဝါ ကိုကြည့်ပြီးရွေးချယ်တာ မဟုတ်သလို၊ ဂုဏ်ပကာသနကိုကြည့်ပြီး ရွေးတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ရွေးချယ်တဲ့ သမ္မတလောင်းတွေကို ပြည်သူလူထုက သဘောကျလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်”
ဒီလို ဘွဲ့မျိုးး အရင် ၁၀ ယောက်ပေါင်းတောင် မရတာ…
ဒီလိုလူမျိုးက သူ့ချည်းပဲကို အင်မတန်လျှော်ကန်တဲ့သူမျိုးပါ..
ချင်းလူမျိုးက… ဂျူးဇာတိနွယ်တွေ… ။
ချင်း…. ဆိုတာကတော့ ကနဦးမှာ ပြသနာနဲနဲရှိနိုင်တယ်..
.ဒေါ်စုကို ကိုယ့်ကားကိုယ်မောင်းပြီး သွားလိုရာ လိုက်ပို့ပေးတဲ့သူကို Driver လို့ အဆင့်နှိမ့်ခေါ်ဆိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီသတင်းဌာနတွေကို မီဒီယာလောကကနေ မှုန်ဝါးပျောက်ကွယ်သွားအောင် လုပ်ရမှာ။
Niknayman Niknayman added4new photos.
သူတို့စော်ကားတာက အကြောင်းအရာအမှားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ပဲ သိက္ခာကျရတာပေါ့ဗျာ..
ဖွမှ ဖော်မှပဲ သူ့ရဲ့ ပေးဆပ်ခဲ့မှုတွေကို သိရလို့ ပိုတောင် လေးစားမိသေး။
ဟုတ်ပါ့ မမ ရေ